Apple Pay dia mijanona tsy miasa any Rosia noho ny fifandonana amin'i Ukraine | iPhone News
Na dia teo aza ny fandrahonana avy amin'ny Vondrona Eoropeana sy Etazonia, tsy noraharahain'i Rosia izany ary nanapa-kevitra ny hanafika an'i Okraina. Taorian'ny fanafihana, ny governemanta Amerikana sy Eoropeana dia nanana nametraka andiana sazy ara-toekarena ho an'ny firenena izay ahitana famerana ny fifampiraharahana amin'ny banky Rosiana any ivelan'ny firenena.
Ny vokatr'io famerana io dia midika fa na Apple Pay sy Google Pay, nitsahatra tsy niasa teto amin’ny firenena. Araka ny tatitry ny Banky Foiben'i Rosia, banky rosiana dimy lehibe no nahita ny famerana ny asany iraisam-pirenena noho ny sazy avy amin'ny firenena hafa, manakana ny mpanjifany tsy hampiasa ny karatrany any ivelany.
Tsy vitan’izy ireo koa famindrana vola amin'ny orinasa izay any amin'ny Vondrona Eoropeana sy any Etazonia.
Ny banky voakasik'izany dia: VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank ary Otkritie. Ny Banky Foiben'i Rosia dia milaza fa ny karatra navoakan'ireo banky dimy ireo dia tsy miasa amin'ny Apple Pay na Google Pay, satria ireo sehatra roa ireo dia miorina any Etazonia.
Afaka manohy mampiasa ny karatra navoakan'ireo banky ireo ny mpampiasa Rosiana any Rosia tsy misy olana, fa tsy amin'ny alalan'ny poketra nomerika an'ny orinasa Cupertino na Google.
Andro vitsy lasa izay, nandefa taratasy ampahibemaso tamin'ny alàlan'ny Twitter ho an'ny Apple ny filoha lefitry ny Okraina mba hahafahan'ilay orinasa dia hanaisotra ny App Store sy ny Mac App Store, fanapahan-kevitra izay tsy mbola nambara.
Ity fanapahan-kevitra ity dia hanimba ny mpampiasa (izay tsy afaka mametraka fampiharana araka ny fantatsika rehetra). Saingy, araka ny filazan'ny filoha lefitra Okrainiana, dia mety hitranga izany hitsangana hanohitra ny governemanta ny mpampiasa mitaky ny handaozany ny fananiham-bohitra an'i Okraina, zavatra tsy azo inoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple Pay dia mijanona tsy miasa any Rosia noho ny fifandonana amin'i Okraina
Ity no endrika tafaporitsaka amin'ny tontonana anoloana amin'ny iPhone 14